အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း မက်ဒလင်း အောဘရိုက် ကွယ်လွန်
FILE - Former U.S. Secretary of State Madeleine Albright speaks atareception celebrating the completion of the U.S. Diplomacy Center Pavilion at the State Department in Washington, Jan. 10, 2017.
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း Madeleine Albright ဟာ မတ်လ ၂၃ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ သူကယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၈၄ နှစ်ရှိပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း မက်ဒလင်း အောဘရိုက် (Madeleine Albright) ဟာ မတ်လ ၂၃ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ သူကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၈၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
မက်ဒလင်း အောဘရိုက်ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ပထမဆုံး အမျိုးသမီးနိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ အဲဒီအချိန်ကတာဝန်အမြင့်ဆုံးထမ်းဆောင်ရတဲ့ အမေရိကန်အမျိုး သမီးတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သမ္မတ ကလင်တန် လက်ထက် ၁၉၉၆ ခုနှစ် ကနေ ၂၀၀၁ ခုနှစ် အထိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ ချက်ကိုဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာလည်း သံတမန်တဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာမိသားစုနဲ့အတူ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မက်ဒလင်း အောဘရိုက်ဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို အားပေးထောက်ခံခဲ့သူတဦး လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံကို ဒုတိယအကြိမ်လာရောက်ခဲ့ပြီး၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတုအခမ်းအနားကိုလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီအခမ်းအနားမှာVOA နဲ့ သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲမျှော်လင့်ချက်ကို အခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“သူတို့ဟာ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေကြပါပြီ။ ဒါဟာနောက်ကြောင်းပြန်လှည်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ သူတို့ဟာအတွေ့အကြုံတွေကနေ သင်ခန်းစာတွေယူပြီး၊ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့” သူမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအခေါက်ရောက်ခဲ့စဉ်က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ NLD အပါအ၀င်၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်က သူ အမေရိကန်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်က မြန်မာနိုင်ငံကို ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်ခဲ့ပါတယ်။
မယ်ဒလင်းအောဘရိုက် ဟာ အောင်မြင်တဲ့ အဆင့်မြင့် သံတမန်တဦးဖြစ်ခဲ့သလို နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ဘာသာရပ်နဲ့ PHD ပါရဂူဘွဲ့ ရခဲ့သူ ပါမောက္ခတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်စာအုပ်စာတမ်းများရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ အောင်မြင်တဲ့ စာရေးဆရာတဦးလည်းဖြစ်တဲ့အပြင် အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တဦးလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သူဟာသတင်းစာဆရာ ဂျိုးဇက် အောဘရိုက် နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သမီး ၃ ဦးထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ သူကွယ်လွန်ချိန်မှာ သားသမီးမြေးမြစ်များစွာကျန်ခဲ့ပါတယ် ။
အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဟောငျး မကျဒလငျး အောဘရိုကျ ကှယျလှနျ
အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဟောငျး မကျဒလငျး အောဘရိုကျ (Madeleine Albright) ဟာ မတျလ ၂၃ ရကျ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ကငျဆာရောဂါနဲ့ ကှယျလှနျသှားပါတယျ။ သူကှယျလှနျခြိနျမှာ အသကျ ၈၄ နှဈရှိပွီဖွဈပါတယျ။
မကျဒလငျး အောဘရိုကျဟာ အမရေိကနျပွညျထောငျစုရဲ့ ပထမဆုံး အမြိုးသမီးနိုငျငံခွား ရေးဝနျကွီးဖွဈခဲ့ပွီး၊ အဲဒီအခြိနျကတာဝနျအမွငျ့ဆုံးထမျးဆောငျရတဲ့ အမရေိကနျအမြိုး သမီးတဦးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ သမ်မတ ကလငျတနျ လကျထကျ ၁၉၉၆ ခုနှဈ ကနေ ၂၀၀၁ ခုနှဈ အထိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး တာဝနျကိုထမျးဆောငျခဲ့ပါတယျ။
သူဟာ ခကျြကိုဆလိုဗကျကီးယားနိုငျငံမှာ မှေးဖှားခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ဖခငျဟာလညျး သံတမနျတဦးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၄၈ ခုနှဈမှာမိသားစုနဲ့အတူ အမရေိကနျပွညျထောငျစုကို ဒုက်ခသညျအဖွဈ ပွောငျးရှနေ့ထေိုငျခဲ့ပါတယျ။
မကျဒလငျး အောဘရိုကျဟာ မွနျမာ့ဒီမိုကရစေီအရေးကို အားပေးထောကျခံခဲ့သူတဦး လညျးဖွဈပါတယျ။ သူ ၂၀၁၃ ခုနှဈ မွနျမာနိုငျငံကို ဒုတိယအကွိမျလာရောကျခဲ့ပွီး၊ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ စိနျရတုအခမျးအနားကိုလညျး တကျရောကျခဲ့ပါတယျ ။ အဲဒီအခမျးအနားမှာVOA နဲ့ သီးသနျ့ တှဆေုံ့မေးမွနျးခဲ့စဉျမွနျမာနိုငျငံနဲ့ပတျသကျတဲ့သူ့ရဲမြှျောလငျ့ခကျြကို အခုလိုပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
“သူတို့ဟာ လမျးကွောငျးမှနျပျေါရောကျနကွေပါပွီ။ ဒါဟာနောကျကွောငျးပွနျလှညျဖို့ မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး။ သူတို့ဟာအတှအေ့ကွုံတှကေနေ သငျခနျးစာတှယေူပွီး၊ လုပျဆောငျနိုငျကွလိမျ့မယျလို့” သူမြှျောလငျ့တဲ့အကွောငျးပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီအခေါကျရောကျခဲ့စဉျက မွနျမာ့ဒီမိုကရစေီခေါငျးဆောငျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ နဲ့ NLD အပါအဝငျ၊ နိုငျငံရေးပါတီတှေ၊ ခေါငျးဆောငျတှနေဲ့တှဆေုံ့ခဲ့ပါတယျ။
၁၉၉၅ ခုနှဈက သူ အမရေိကနျဆိုငျရာ ကုလသမဂ်ဂသံအမတျကွီး အဖွဈတာဝနျထမျးဆောငျခဲ့စဉျက မွနျမာနိုငျငံကို ပထမဆုံးအကွိမျ လာရောကျခဲ့ပါတယျ။
မယျဒလငျးအောဘရိုကျ ဟာ အောငျမွငျတဲ့ အဆငျ့မွငျ့ သံတမနျတဦးဖွဈခဲ့သလို နိုငျငံတကာဆကျဆံရေး ဘာသာရပျနဲ့ PHD ပါရဂူဘှဲ့ ရခဲ့သူ ပါမောက်ခတဦးလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျစာအုပျစာတမျးမြားရေးသား ထုတျဝခေဲ့တဲ့ အောငျမွငျတဲ့ စာရေးဆရာတဦးလညျးဖွဈတဲ့အပွငျ အောငျမွငျတဲ့လုပျငနျးရှငျတဦးလညျး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
သူဟာသတငျးစာဆရာ ဂြိုးဇကျ အောဘရိုကျ နဲ့ လကျထပျခဲ့ပွီး သမီး ၃ ဦးထှနျးကားခဲ့ပါတယျ။ သူကှယျလှနျခြိနျမှာ သားသမီးမွေးမွဈမြားစှာကနျြခဲ့ပါတယျ ။